Ciyaaraha maanta iyo rajada Ghana - BBC News Somali
Ciyaaraha maanta iyo rajada Ghana
Kaddib labo maalmood oo nasasho ah ayaa galabtay waxaa dib u billabanaya ciyaaraha koobka kubbada cagta adduunka ee ka socda Konfurta Afrika, oo galay marlaxadiisa saddexaad, oo ah isreebreebka sideeda kooxood.
Ciyaarta u horreysa, waxaa saacadda geeska afrika marka ey tahay shanta galabnimo,gegida Nelson Mandela BayStadium ee magaalada Port Elisabeth ku kulmaya Brazil iyo Netherlands.
Brazil waxaa wareega 16 kooxod ey soo reebtay kooxda Chile. Kooxda Netherlands, waxay reebtay kooxda Slovakia.
Brazil waxaa koobka adduunka ey ku guleysatay shan jeer. Ciyaaraha sannadkakan, waxa eyla timid qaab ciyaareed ka duwan, ciyaarihi lagu yaqaanay, oo ku dhisnaa xariiftan qurux badan iyogoysmo lala yaabo, weerarkuna joogto yahay. Waxaana ey ka liidan jireen difaaca iyo goolhayaha. Haddase inkasto ciyaarihi laguyaqaaneyey aanay ka maqneen, haddana, waxay dhiseen difaac adag oo lafdhabar u yihiin Lucio iyo Juan,khad-dhexe oo si fiican isugudubbaridan maamulkiisana ey hayaan Gilberto Silva iyo Felipe Melo, iyo weerar khatar ah ooey horkacayaan Fabiano iyo Robinho. Geesahana waxaa shaqo fiican ka qabta Maicon iyo Elano oo wali la xanuunsan dhawaacika soo gaaray ciyaarti 20kii juunyo dhex martay brazil Ivory Coast.Waxaa laakin booskiisa buuxiyey Dani Alves.
Netherlands waligeed kuma guleysanin koobka adduunka,haseyeeshe labo jeer waxaa gaartay ilaa iyo ciyaarta finaalka,1974 iyo1978.Labada jeerba waxaa ka badiyey dalalki qabanqaabiyey ciyaarahaas, 1974 waxaa ka badisaykooxda Jarmalka. Sannadkii 1978 ciyaarti finaalka ee ka dhacay Buenos Aires ka badisay Argentina.
Sannadihi 70ka ayaa Netherlands waxaa ey ka mid aheed kooxaha ugu ciyaar fiican adduunka, iyado la soo baxday ciyaar u qaabeysan in xubinkasta ka dheeli karo waaxkasta, difaaca khad-dhexe iyo weerarkaba, oo laacibkii meeshi loogu tala galay ka dhaqaaqa waxaa baddalaya mid kale, oo buuxinaya booska banaanaaday.
Kaddib Netherlands xidigeedi hoos ayuu u dhacay oo waxaa fagaaraha ciyaaraha sidii la rabay ey uga muuqan weysay sannadihii 80ka. Waxaa dib loogu arkay sannadihii sagaashanka.
Sannadkakan waa koox si fiican u dhisan, oo sida brazil ookale, si weyn u xoojisay khad-dhexe. Laacibkeeda ugu khatarsan waa Arjen Robben.
Ciyaarta kalena waxaa caawa sagaalka iyo barka habeenimo sacadda Geeska Afrika ey ka dhici doontagegidaSoccer City ee magaalada Johannesburg. Waxaana halkaas isku arki doona Uruguay oo Konfur America ka soo jeeda iyo Ghana oo ah dalka kaliya ee Afrika mathalaaya, kaddib markii shanti kale ( Konfur Afrika, Camerun, Algeria, Nigeria, Ivory Coast) ey ku hoobteen wareegi hore ee ciyaaraha adduunka.
Uruguay waxaa hadda ka hor lab jeer ey ku guleysatay ciyaaraha adduunka. Waana markii 11aad oo ey ka qeybgaleyso ciyaaraha adduunka.
Ghana waa marki labaad ooey u soo xaadireyso ciyaaraha adduunka. Ciyaarihikadhacay Jarmalka 2006di waxaa lagu reebay wareega 16ka kooxood. Haddana waxaa ey gaartay wareegga sideeda koxood, iyado caawa u halgamidoonta sidii ey ugu gudbi laheed ciyaaraha semifinaalka.
Ghana waxay rajeyneysa inay gaarto halka aanay waligeed gaarin koox Afrikaan.